Muchina Zvikamu Kugadziridza, Kuchengetedza Zvikamu Kugadzirisa - K-Tek
K-Tek Machining Co, Ltd. yakavambwa muna 2010, iri mu "World Fekitori" -Dongguan, China, inovhara nharaunda inopfuura zviuru makumi maviri metres mativi, inozivikanwa mune chaiyo michina zvikamu kugadzira uye yapfuura iyo ISO9001: 2015 chitupa .
Tinogona kugadzirisa kugadzirwa kwemhando dzese dzeakarurama michina zvikamu zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, zvigadzirwa zvine chekuita nemishini, zvemagetsi, otomatiki, mota, zvekurapa, simba nyowani uye mimwe minda.
Yakakwira Hunhu Kugadziriswa
Kuti tione hunhu hunodiwa hwevatengi vedu, isu takatumira epamberi yekugadzirisa michina uye yekuyedza michina senge mashanu-akabatana Machine (DM), CNC, WEDM-LS, Mirror EDM, Yemukati / Yekunze Grinder, Laser Kucheka, 3D CMM, Kureba Gauge uye Chinyorwa Kuongorora nezvimwewo kubva kuGerman, Japan, Switzerland neUnited States.
CNC hwokugaya hwakabvira & Turning
5 akabatana CNC machine centre inopa nemazvo machine yepamusoro nemazvo uye zvakaoma zvikamu.
CNC hwokugaya hwakabvira (3-4Axis)
Ipai 3-akabatana uye 4-akabatana CNC azvikuya mabasa.
CNC Yokuchinja (2-12Axis)
Ipai 1-400 (mm) CNC yekutendeuka uye yekugaya komputa kugadzira
Ipa zvakakwana kukuya kwemakomba uye madenderedzwa ekunze.
Ipa zvakakwana waya yekucheka machine.
Kupisa Kurapa & Kupedza
ChiPolish, anodise, passivation, zinc / nickel / chrome uye sirivha yakanamirwa pamoto, kupisa kupisa nezvimwe.
Kutarisana nevanhu, Kuenderera mberi kwehunyanzvi, Hunhu uye kugona, Mutengi kutanga.
Kuti upone nemhando yepamusoro, kugutsikana kwevatengi kwakasvika kupfuura 95%, edza kuwana 100% kugutsikana kwevatengi. Iyo mhando sisitimu inosimbiswa pahwaro hwe ISO9001: 2015 uye kumisikidza yakakwira-chaiyo michina zvigadzirwa, zvichisanganisira kusangana nezvinodiwa zvevatengi kusvika pakukwirira kusvika. Iyo mhando sisitimu inotora maitiro akavakirwa mhando yekudzora maitiro, inovhara mashandiro ebhizinesi ekambani, kugadzira uye kugadzira, vatengi basa, nharaunda uye 5S yekutarisa, nezvimwe.
3 Points Yemukati Micrometer
Mukucherechedza vese vatinoshanda navo kuyedza uye mipiro kubasa reK-TEK, pamwe nekusimudzira kutaurirana pakati pevamwe, simbisa kutaurirana uye dockin ...
Mushure memakore gumi ekuvandudza, K-Tek haina chete ine huwandu hukuru hwevashandi uye hwehunyanzvi vashandi uye rakanakisa manejimendi timu, asi zvakare ine yakanakisa timu yekutengesa. Kuti urege mo ...